वर्षमा श्रमिकले कहिले कति दिन विदा पाउँछन् ? यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
२५ असार २०७६, बुधबार ११:२१
काठमाडौं । श्रमिकलाई वर्षमा कहिले कति दिन विदा दिने भन्नेबारेमा ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । श्रम ऐन २०७४ ले सार्वजनिक विदा, घर विदा, बिरामी विदालगायतका दिनमा कति विदा दिने भनेर किटान गरेको छ । श्रम ऐनको परिच्छेद ९ मा विदा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनको दफा ४० मा श्रमिकले प्रत्येक हप्ता एक दिन साप्ताहिक विदा पाउने उल्लेख छ । दफा ४१ सार्वजनिक विदाबारे व्यवस्था गरेको छ । जससमा प्रत्येक श्रमिकले मई दिवससहित १३ दिन र महिलाको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवससहित १४ दिनको विदा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
स्वास्थ्य, सुरक्षा, यातायात, सञ्चारजस्ता रोक्न नहुने लगातार काम गर्नुपर्ने संस्थामा कार्यरत श्रमिकलाई साप्ताहिक विदा वा सार्वजनिक विदामा काम गरेवापत काम लगाएको २१ दिन भित्र सट्टा विदा दिनु पर्ने श्रम ऐन २०७४को दफा ४२ मा उल्लेख गरिएको छ ।
यता सोही ऐनको दफा ४३ ले भने घर विदाको रुपमा श्रमिकले काम गरेको अवधिको २० दिनको एक दिनको दरले पारिश्रमिकसहितको घर विदा पाउने व्यवस्था छ । दफा ४३ घर बिदाबारे उल्लेख गरिएको छ, ‘ (१)श्रमिकले काम गरेको अवधिको बीस दिनकोएक दिनको दरले पारिश्रमिक सहितको घर बिदापाउनेछ ।(२) शिक्षण संस्थामा कार्यरत श्रमिक वावर्षे वा हिउँदे बिदापाउने श्रमिकले घर बिदापाउने छैन।तर त्यस्तो बिदा घर बिदाअवधिभन्दा कम हुने भएमा जति दिन कम भएको हो त्यति दिन घर बिदापाउनेछ ।’
श्रमिकले वर्षमा १२ दिन पारिश्रमिकसहित बिरामी पाउने व्यवस्था गरेको श्रम ऐनको दफा ४४ मा एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि काम गर्ने श्रमिकले सोही अनुपातमा विरामी बिदापाउने उल्लेख छ । गर्भवती महिला श्रमिकले गर्भवती विदा १४ हप्ता पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । १४ हप्ताको गर्भवती विदाको व्यवस्था गरेको ऐनको दफा ४५ को उपदफा २ मा ‘गर्भवती श्रमिकले प्रसूतिहुने सम्भावित मितिभन्दा कम्तीमा दुई हप्ता अगाडिदेखि प्रसूतिभएको कम्तीमा छ हप्तासम्म अनिवार्य रुपमा बिदाबस्नु पर्नेछ ’उल्लेख छ । यद्यपी सोही ऐनको उप दफा ३ ले भने गर्भवती महिलाले ६० दिनको पारिश्रमिकसहितको विदा पाउने भए पनि बाँकी अवधिको पारिश्रमिक नपाउने किटान गरेको छ। सोही ऐनको दफा ७ ले श्रीमती सुत्केरी हुने भएमा श्रीमानले पारिश्रमिकसहितको १५ दिन प्रसुतिस्याहार विदा पाउने छ ।
ऐनको दफा ४८ले १३ दिन किरिया विदा पाउने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपी सोही ऐनले विदालाई अधिकारको रुपमा स्वीकारेको भने छैन । दफा ५१ ले बिरामी विदा, किरिया विदा र प्रसुति विदाबाहेकका अन्य विदालाई अधिकारको रुपमा दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
खुशीको खबर : कृषि विकास बैंकमा ३८४ जनाका लागि जागिर खुल्यो
विदेशमा औसत कति कमाउँछन् नेपाली युवा ?
नेपाली कामदारलाई खुसीको खबर, कोरियामा बढ्यो न्यूनतम पारिश्रमिक